I-Casa Miel eduze nolwandle, i-WiFi, i-airco, i-TV yesathelayithi - I-Airbnb
I-Casa Miel eduze nolwandle, i-WiFi, i-airco, i-TV yesathelayithi
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Misha
I-chalet enamakamelo angu-3 ethokomele ku-300 m kuphela ukusuka ogwini oluhle lwesihlabathi esimhlophe e-Islantilla (Isla Cristina) e-Andalusian Costa de la Luz. Indlu inethala kanye ne-patio lapho ungahlala khona futhi uphumule nomndeni wonke.
Ngenxa yeCorona, sihlanza indlu kahle kakhulu, sisebenzisa imikhiqizo ekhethekile elwa namagciwane kanye ne-antibacterial.
Kukhona indawo enhle yokuhamba ngasogwini lolwandle, ihlathi elimangalisayo likaphayini nezihlahla zikagamthilini ezindundumeni. Isimo sezulu esihle unyaka wonke!
Indlu inezitezi ezimbili, ithala, i-patio, amagumbi okulala ama-3, amagumbi okugezela ama-2.
Igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala, i-inthanethi, i-TV yesathelayithi, isethi yesinema yasekhaya kanye neqoqo lama-DVD nama-CD.
Ikhishi lihlome ngokuphelele ngomshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha, i-heater yamanzi, umenzi wekhofi njll.
Kunendlu yangasese phansi kanye nendlu yokugezela ephelele eneshubhu elishisayo esitezi sokuqala.
Indlu yethu inakho konke okudingayo. Uma uphuthelwa okuthile, sikuthengela nje :-)
Isikhungo sezitolo esiseduzane yi-Centro Comercial y de Ocio de Islantilla, eku-Av. e-Islantilla. Kuyimizuzu eyi-13-15 ukuhamba ngezinyawo ukusuka eCasa Lea. Ngesikhathi esishisayo, isitolo esikhulu esiseduze singatholakala e-Paseo de Pte, eduze nolwandle.
Le ndlu isendaweni ethule kakhulu, emamitha angama-300 kuphela ukusuka ogwini elinesihlabathi esimhlophe esimangalisayo kanye namamitha angama-600 ukusuka ehlathini elisezintabeni ezinezihlahla zikaphayini kanye nekagamthilini.
Hamba kahle e-paseo maritime eduze nolwandle. Ukuzola kakhulu, futhi ungaqiniseka ukuthi uthola amagobolondo amahle ogwini :-)
Isikhungo sokuthenga singaba yimizuzu eyi-10 ngebanga lokuhamba ngezinyawo, sinezindawo zokudlela ezinhlobonhlobo namabha.
Idolobhana labadobi iLa Antilla liyibanga elingu-1 km (i-barrio ezungeze i-calle Cefiro). Iyiqiniso kakhulu!
I-Marismas de Isla Cristina - indawo okufanele uyibone yesithandwa sezinyoni. Emashini uzohlangana nazo zonke izinhlobo zezinyoni, kuhlanganise namaflamingo.
I-Seville enhle ingamakhilomitha angama-130 ukusuka e-Islantilla, engingasoze yalibaleka!
I-Magic Cordoba ne-Cadiz zombili cishe amahora angu-2 ngemoto.
Wonke lamadolobha amahle aseSpain, agcwele ilanga, izakhiwo ezinhle nomlando.
Ichweba elidala lase-el Terron kanye ne-Marismas (amamashi) del Río Piedras ayisigamu sehora ukushayela.
Ipaki kazwelonke i-Doñana eduze kwase-Huelva ilele endaweni eyihora eli-1 futhi inhloko-dolobha yesifundazwe i-Huelva inokushayela imizuzu engama-30.
Iklabhu yegalofu icishe ibe yimizuzu eyi-10 ngebanga lokuhamba ngezinyawo.
I-Portugal nayo yonke imizana yayo emihle yogu lomlando ihamba ngemizuzu engama-20 kuphela. Zama enye yezindawo zokudlela zezinhlanzi lapho, awusoze wakukhohlwa! Izindawo ongaya kuzo: i-Albufeira, i-Casela Velha (ikhulu le-10!), i-Monte Gordo, i-Vila Real, i-Castro Marim, amadolobhana angempela aseduze ne-Guadiana.
Futhi ungakhohlwa ukuvakashela iParque Natural da Ria Formosa.
Inombolo yepholisi: VFT-HU-00106
Izilimi: Nederlands, English, Русский, Español